Inter Milan oo isha la raacaysa muluqa Federico Chiesa – Gool FM
(Milano) 13 Nof 2017 – Inter Milan ayaa sida lasoo sheegayo waxay safka sare uga jirtaa kooxaha cayrsanaya Federico Chiesa, tiiyoo ay jirto inuu muluqani ku dhow yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo Fiorentina.
Sida ku qoran Gazzetta dello Sport, Fiorentina ayaa ogolaatay inay Chiesa ka dhigto laacibka kooxda ugu mushaharka badan “isagoo qaadan doona ku dhowaad €2m sanadkii iyadoo lagu xirayn wax shuruud ah” marka ay dhamaato bishan Nofeembar.
Yeelkeede, warsidaha ayaa ka digaya in Inter aysan waxaasi ku yalmeeynin, iyadoo uu macallinka kooxdaasi ee Luciano Spalletti uu xiddig yarahan u arko “mid fure u noqon kara mashruuca curdanka ah ee Nerazzurri.”
“Waa laacib aad u wanaagsan, mid ka mid ah da’yarta ugu fariidsan ee haatan joogta,” ayuu Spalletti u sheegay La Gazzetta.
“Waa sida aabihii oo kale, wuxuu leeyahay dabci wanaagsan iyo waxyaabo kale, waxaan ka helaa sida uu kooxda u eego ee uusan kaliya uga fikirin bandhiggiisa shakhsiga ah.” ayuu raaciyay.
Chiesa, oo uu dhalay halyeeygii Calcio ee Enrico, ayaa 2 gool dhaliyay, 3 kalena dhigay 11 kulan ee uu ilaa haatan kooxdiisa Viola u saftay, waxaana horay u cayrsanayay kooxo ay ku jiraan Napoli & Zenit St Petersburg.